'Angazi kungani amaqembu aphesheya engamsayinisi uKhune' | News24
'Angazi kungani amaqembu aphesheya engamsayinisi uKhune'
Johannesburg – Umqeqeshi weBafana Bafana, u-Ephraim 'Shakes' Mashaba, usezwakalise ukuncoma unozinti waleli qembu le sizwe, u-Itumeleng Khune, wamchaza njengomunye wonozinti abasezingeni eliphezulu emhlabeni jielekele.
“Ngokungangabazi ungomunye wonozinti abahamba phambili emhlabeni futhi ngisadidekile ukuthi kungani enye yamakilabhu aphezulu e-Europe ingakamsayinisi,” uMashaba ucashunwe kanjalo kwi-website yeSAFA ngemuva kwesithangami nabezindaba.
OLUNYE UDABA: Kungifanele ukuyodlala phesheya - Khune
Ngonyaka owedlule, unozinti wokuqala kuReal Madrid kanye naseqenjini lesizwe laseCosta Rica, uKeylor Navas, naye wazwakalisa ukuncoma lo kaputeni weKaizer Chiefs, wathi kuyaxaka ukuthi kungani esadlala kwiPremier Soccer League (PSL) esikhundleni sokuthola isivumelwano esizomholela itshe lemali kwenye yamaligi aphezulu e-Europe.
UMashaba uthi uKhune usezingeni elifanayo nonozinti abasezingeni eliphezulu emhlabeni jikelele.
“Usezingeni lomhlaba futhi ungomunye wonozinti abayishumi abaphambili emhlabeni,” kuqhuba uMashaba.
Lo mqeqeshi uqhube wathi yize noma yena nethimba labaqeqeshi sebenabo abadlali abangu-11 abazoqala ngabo emqondweni, kodwa isinqumo sokuthi ubani uzofakwa enkundleni sizoncika ekutheni bazodlala kanjani uma beziqeqesha.
Uphinde wagcizelela ngokuthi asikho isidingo sokuthuswa amagama amakhulu abadlali beSenegal ngoba umlando wokuhlangana kwalama qembu ukhombisa ukuthi kuncane okuwahlukanisayo.